I-Cuttlefish ngee-ertyisi - Iresiphi | Indlela yokupheka
UAlicia tomero | 29/10/2021 20:56 | Iresiphi, Iiresiphi zokupheka
Siyathanda ukwenza ezi zokupheka zilula zigcwele incasa kunye nezithako ezisempilweni kakhulu. Esi sidlo sine-cuttlefish etyebileyo epakishwe ngumthombo omkhulu weeminerali kunye nee-ertyisi zethenda ezipakishwe ngamavithamini amaninzi. Uya kuthanda kwakhona ukwenza isitya esahlukileyo abantwana abanokuzama kwaye sigcwele umbala.
Ukuba uthanda ukuzama izitya ezilula nge-cuttlefish, unokuzama iresiphi yethu 'I-cuttlefish ebhakiweyo ngeetapile'.
I-400 g ye-cuttlefish ecocekileyo
I-500 g yee-ertyisi ezifriziwe okanye ezithambileyo
Isiqingatha seglasi yewayini emhlophe
Ityuwa kunye nepepile emnyama yomhlaba
Sisika kakuhle i-anyanisi kunye ne-3 clove yegalikhi. Sitshisa ioli yeoli kwi-pan ebanzi yokucoca. Sifaka i-anyanisi kunye negalikhi kwaye sivumele ukuba bapheke.
Sicoca i yeSepia kuyo yonke into engasincediyo kwaye siya kuyinqumla amaqhekeza amancinci. Siyongeza kwi-sauce epanini. Sijikeleza imizuzu emininzi ukuze siyenze.
Siyongeza ertyisi kwaye siqhubeka siqhotsa kwaye sixuba ukuze yonke into iphekwe kunye.
Siyalungisa ityuwa kunye nepepper emnyama yomhlabasongeza i isiqingatha seglasi yewayini emhlophe kunye iglasi yomhluzi yeentlanzi. Kuya kufuneka uyiyeke ipheke kangangemizuzu eyi-15 de ubone ukuba ii-ertyisi zithambile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziya » Iresiphi » I-Cuttlefish ngee-ertyisi
Imigqomo yeenkukhu kunye netumata
Iintlama ezimfutshane ezilula